DAAWO: DF oo baaq deg deg ah ka soo saartay dhalinyaro ku dhibaateysan K/AFrica.. - Hablaha Media Network
DAAWO: DF oo baaq deg deg ah ka soo saartay dhalinyaro ku dhibaateysan K/AFrica..
HMN:- Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Koonfur Africa Mudane Jamaal Maxamed Barow ayaa ugu baaqay ganacsatada Somaliyeed ee dalka Koonfur Africa iney caawiyaan dhalinyarada ku dhibaateysan dalkaasi oo danta biday darbi jiifnimo.
Muuqaalo laga soo qaaday dhalinyarada ku dhibaateysan ee dalka Koonfur Africa ayaa muujinayay dhalinyaro Somaliyed oo nolosha ka dhacay,islamarkaana isticmaala drugs nuucyadooda kala duwan.
Ambassador Barow ayaa sheegay in dhalinyarada Somaliyeed ay yihiin kuwii beri la wareegi lahaa mas’uuliyada dalka loona baahan yahay in la caawiyo hada.
Wixii ka danbeeyay markii dagaalada ay ka dhaceen dalka,waxaa kala firxad ku dhacay shacabka Soomaaliyeed oo qofba meel ciirsaday.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhibaateysan dalka Koonfur kuwaasi oo jiifsada darbiyada,islamarkaana isticmaala drugs kala duwan.